tinye ederede / ndepụta okwu / captions ka iMovie on Mac na iPad
Ọ bụ-ahụ kwuru na-agbakwunye captions na ndepụta okwu bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà atụmatụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na fim ma ọ bụ ndị ọzọ video a na-egwuri ghọtara na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị nkuzi na-agụ ruo ọgwụgwụ na-eme ka n'aka na ọ bụghị nanị na echiche nke na-agbakwunye ndepụta okwu a kọwara na zuru ezu ma onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị ọkaibe omume update nke ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ịchọ online.
Gịnị bụ caption na sobtaitel?
CC ma ọ bụ ezigbo captioning nke a na-ezo dị ka captions bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà usoro iji jide n'aka na ndị ọrụ ga-esi okwu ndị a na-egosipụta n'elu nkiri nke mere na n'isi sekpụ ntị nwere ike ghọtara na mfe na ọma kọwaa n'ụzọ. Ọ na-ezo dị ka subtitling na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na echiche na-adịghị maa metụtara dialogues ma ọ bụ ihe ndị ọzọ yiri stof ma nke bụ eziokwu nke okwu ahụ bụ na ihe ọ bụla nke a na-egosipụta jidesie ihuenyo-ezo dị ka caption nke pụrụ ịdị a òkù ime ihe dị ka ọtụtụ nke YouTube videos. Ọ bụkwa a usoro nke ana achi achi na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu terminologies na-etinyere ịgbakwunye ndị a na- video dị ka ha na-eme nnọọ ihe mgbe ụfọdụ na ya mere ha kwesịrị iwere dị ka a dị oké njọ echiche nke nwere nnọọ ukwuu dị mkpa karịa mere ụtọ.
Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe nhazi na nke a nke mbụ e ẹkenam ke National ogbako maka ntị chiri ebe echiche mbụ ghọọ eziokwu. Ihe ịga nke ọma na nzaghachi ya bụ otú akarị na ndị ọrụ na-n'ụzọ zuru okè ezi na-chọrọ iji echiche na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe nhazi na-eme na a n'ụzọ na e weere dị ka ndị kasị mma na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ihe kasị mma pụta na-site na nke a banyere. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe nhazi n'ụzọ a nkiri ma ọ bụ video a nụrụ kpamkpam tupu captions na ndepụta okwu na-kwukwara. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọ pụkwara-ahuta ka otu nke kasị mma na ọkaibe nhazi na nke a nke na-enye ohere ka ndị ọrụ na inwe echiche n'ụzọ na-bụ mma niile ugboro na-enye ohere ndị ọrụ na- jide n'aka na ihe kasị mma e nyefewo ha n'aka enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Iji echiche na iche iche na ngwaọrụ
Iji mee ka n'aka na echiche e emejuputa atumatu na nke kacha mma n'ụzọ ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe pụta site n'itinye ya na-adị iche iche na ngwaọrụ na OS dị ka iPad maka ngwaọrụ na Mac dị ka os. The n'ozuzu echiche bụ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe nhazi na-eme na a n'ụzọ na-bụ ihe kasị mma na mkpokọta onu na-atụle ga-dị ka onye nke nwere niile mkpa ngwaọrụ agbakwunyere.
Na a nkuzi usoro nke na-agbakwunye captions na ndepụta okwu bụ nanị dabeere na eziokwu na wuru na terminologies na-eji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mkpokọta onu bụkwa ihe na dị na akara na chọrọ nke ọrụ iji jide n'aka na echiche na-adọrọ mmasị nakwa lures ndị ọzọ ọrụ n'ime azụmahịa. Na-esote nke ndị nkuzi bụ ihe niile banyere agbakwunye CC na ndepụta okwu ka iMovie iji iPad na Mac.
Part 1: Olee ịgbakwunye ederede / ndepụta okwu / captions ka iMovie on Mac?
Part 2: Olee ịgbakwunye ederede / ndepụta okwu / captions ka iMovie on iPhone / iPad
Olee otú tinye ederede / ndepụta okwu / captions ka iMovie on Mac?
Iji mee ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe usoro a soro na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro na nke kacha mma n'ụzọ:
The iMovie ngo bụ ka a ga-emeghe onye ọrụ mkpa ijide n'aka na na aha button na-enwe iji họrọ aha ịke na mgbe ahụ na-emetụta ya. N'ihi na oru ngo-emeghe ụzọ bụ File> oru ngo aha.
Ọ bụrụ na ndị CC bụ na-kwukwara n'etiti videos mmanya bụ dọkpụụrụ iji jide n'aka na ihuenyo amama green tupu clip:
Ederede bụ mgbe ahụ ka-banyere dị ka nzọụkwụ ọzọ:
Ịgbanwe oge nke clip onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na CC nkụnye eji isi mee bụ abụọ clicked na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi maka sobtaitel Duration:
Olee otú tinye ederede / ndepụta okwu / captions ka iMovie on iPhone / iPad
Usoro a ga-soro na nke a na-esonụ na onye ọ bụla na ihe ọ bụla nzọụkwụ bụ a ga-agbaso na-arụpụta ihe kasị mma:
Mgbe a video arụ na iPad na ala onye ọrụ nwere ike lee usoro isiokwu nke buttons na n'ebe aha button bụ na-enwe iji jide n'aka na onye ọrụ Ọganihu na nke a na usoro amalite:
Ọnọdụ nke caption, sobtaitel ma ọ bụ ederede bụ mgbe ahụ ka a ma onye ọ bụla, center ma ọ bụ ala na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma:
Ederede edit button a na-ahụ na-enwe iji jide n'aka na ederede dị ka kwa mkpa ọchịchọ na-achọ n'aka na-ahọrọ na etinyere na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na nke a na-agwụ usoro na n'uju na needful e mere.
> Resource> iMovie> Olee otú iji tinye ederede / ndepụta okwu / captions ka iMovie on Mac na iPad